Nzira dzakanakisisa dzezvitima muEurope | Absolut Kufamba
Nzira dzakanakisisa dzezvitima muEurope
Absolut Kufamba | | vamwe
Kunyangwe paine chokwadi chekuti ndege ichiri nzira yekushandisa yakanyanya kutakurwa neruzhinji rwevagari, chokwadi ndechekuti chitima chakakwanisa kuita nzira yacho zvishoma nezvishoma munzira dzekufamba, kunyanya muEurope. Izvi zvinoratidzwa nezvakasiyana zvitima zvinopfuura zvave zvichioneka, izvo zvinobvumidza kufamba pakati penyika dzakasiyana nerusununguko rukuru. Kune rimwe divi, kufamba nechitima muEurope hakufanirwe kunge kuchidhura, kutaura zvazviri zvinokwanisika kuwana iyo anobata zvakanyanya naOmio uye tanga rwendo. Uye ndeyekuti iwo mikana iyo inopa iyo chitima kana uchifamba yakasarudzika, kutsvaga nzvimbo dzinoshamisa zvisingaite mune mamwe mamiriro.
Zvisinei, kuwana nzvimbo dzinoyevedza uye dzimwe nguva mutengo wakachipa handizvo zvega zvakanakira nzira iyi yekufambisa asi inopa nyaradzo huru kana uchifamba uye, inobatanidza maguta makuru. Iyo yekupedzisira inotungamira kumigwagwa yakawanda muEurope, zvinoenderana nezvinodiwa uye zvido zvemufambi. Zvakare, zvakajairika kazhinji ndidzo dzinobatanidza misoro mikuru yeEuropean kana maguta anozivikanwa kwazvo mukondinendi, asi kune zvakare vakawanda vanosarudza nzira dzezvitima dzinokutendera kuti ufambe nyika imwe chete munguva pfupi uye pasina kana chinhu chaunoshaya.
Pakati penzira idzi, akati wandei akamira ave akakosha kana tikazombofunga kutora rwendo rwechitima kuburikidza neEurope. MuSpain, imwe yenzira idzi ndiyo inomhanya iyo Transcantábrico kujoina León neSantiago de Compostela. Pakati pemazuva masere, maguta akasiyana siyana paCantabrian Coast anoshanyirwa, achifarira tsika nemagastronomy enharaunda yacho. MuScotland yakaisvonaka rwendo chairwo rwunowanikwa kune vanoda vechidiki wizard Harry Potter. Iyo njanji inobatanidza Glasgow kuenda kuMallaig ichipa nzvimbo dzakaita sedzakarota mune inozivikanwa Glenfinnan Viaduct nemadhamu eElit neShiel.
MuGerman iwe uchawana imwe yeakare nzira pasi rese: sango dema. Mutsetse uyu unobatanidza maguta eOffenburg neConstance sezvo ichidarika chikamu chemashiripiti Dondo Sango, ichimira munzvimbo dzinotyisa nemisha midiki yemakomo. Sezvo uri pano, hazvikuvadze kubheja munzira yaunofamba maguta akakosha kwazvo kubva munyika. Asi kana tiri kutsvaga nzira isingakanganwike, ndiyo inoitwa na iyo Bernina Express kuburikidza neSwitzerland neItari. Iyo nzira inopfuura nemakumi mana nematatu ematanhatu, mabhiriji 55, iro guta rekare muSwitzerland nemataundi madiki muItaly Lombardy. Uku ndiko kunaka kwaro zvekuti nzira yakaziviswa UNESCO World Heritage Saiti.
Holland ndiyo imwe yenyika dzine nzira yerunako rukuru, kunyanya muchirimo. Kudanwa Ruva Nzira inomhanya kubva kuHaarlem kuenda kuLeiden ichipfuura nemuminda inoshamisa yetulips yemarudzi akasiyana Nekudaro, kune avo vanoda kugara padhuze nepamba, zvinogara zvichikwanisika kusarudza kuona misoro yakaita seParis, London, Brussels kana Berlin. Izvi zvinonyatso kutaurirana nemumwe, saka kufamba pakati pavo hakuzove dambudziko. Chekupedzisira, yeuka kuti idzi nzira dzinogona kuitwawo kunze kweEurope, kufamba nechitima muJapan, semuenzaniso, kuburikidza nepasipasipoti dzakakosha dzenyika yega yega dzinokutendera iwe kufamba famba nenyika nyore uye nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Nzira dzakanakisisa dzezvitima muEurope
Nzira yekutenderera sei kuParis